Habka ugu fiican ee Soomaaliya uga gudbi karto kala guurka oo laga doodey
Habka ay Soomaaliya uga gudbi karto marxalada kala guurka oo laga doodey
GAROWE, Puntland - Madaxweynaha Dowladda Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, ayaa xalay ka qeybgalay kulanka 4-aad ee Doodaha looga hadlayo habka ugu wanaagsan ee Soomaaliya uga gudbi karto marxalada kala guurka.
Doorashooyinka Soomaaliya ee 2020-21 ayaa qorshuhu yahay in ay noqoto qof iyo cod, balse waxaa la gelinayaa shaki haddii ay dhici karto, iyaddoo la cuskanayo diyaar-garow la'aan iyo xaaladda amni ee waddanka.
Baarlamaanka federaalka ah ayaa todobaadyadda soo aadan la filayaa in ay go'aan ka gaaraan arrimaha is-barkan ee ku geedaaman coddeynta, iyaddoo ay isa soo tarayaan digniinaha ku saabsan muddo korors.
Sharciga doorashooyinka oo xeer-dejinta dalka ay meelmarisay waxaa qaadacay qaar kamid ah maamuladda iyo siyaasiyiinta dalka, iyagoo sheegay in ay ku jiraan qodobo "xalaaleynaya waqti ku darsi".
Beesha Caalamka oo balanqaadey in ay diyaar la tahay taageero kasta oo la xiriirta dhanka doorashooyinka ayaa soo jeedisay in aysan waqtigeeda ka dibmarin doorashooyinka, taas oo bud-dhig u ah dimuqraadiyadda waddanka.
Ra'iisul Wasaare Ku Xigeenka dalka ayaa fariintan hawada u mariyey maamulka Hargeysa.
Diyaarad Air Djibouti oo shil ku gashay Garoonka Garowe
Puntland 02.12.2020. 10:49
Xeerka Isgaarsiinta iyo Khidmadaha Puntland oo la meelmariyey
Puntland 14.11.2020. 13:00
Karaash oo guddoomiyey shirka maamul baahinta dowladda Puntland
Puntland 08.11.2020. 15:00
Murashax madaxweyne Geelle oo u digay madaxweyne Farmaajo 03.12.2020. 09:10